Ukuqhekeka kwe-forearm: ukuvuselelwa nokuphathwa
I-forearm ingxenyeni yengalo, ehlanganisa amathambo e-radial, i-ulnar. Eqinisweni, lokhu kuyandiswa kwehlombe. Ihlangene ihlangene umhlanganiso. I-frontarm ixhunywe kuhlangothini lwesandla esihlangene nesandla samakhanda. Ku-ICD, ukwephulwa kwe-forearm kubhalwe ngekhodi S52. Ukulimala okunjalo ukulimala okujulile okuphoqelela ukuxhumana nodokotela ngokuphuthumayo. Enye yezinyathelo ezibalulekile zesikhashana ukusivimbela ukuphulwa kwe-forearm. Kumele kwenziwe masinyane, ngokucophelela, ngaphandle kokweba isimo sesiguli.
Ukuhlukunyezwa kubangelwa ukulimala kwamathambo, okubangela ukuthi:
Ingozi yokuphulwa kwesibhamu isiphezulu uma isiguli sibonakala nge:
Ubudala bukhulile kunokulinganisa;
Kukhona amathuba amakhulu okuphulwa kwe-forearm kulabo abhekene nobudlova noma abatholi ukudla okwanele.
Ngokwehluleka okuvulekile / okuvaliwe kwe-forearm, iziguli zikhononda nge:
Ukuguqulwa kwendawo ethintekile.
Ingalo egulayo ayikwazi ukuhamba ebangeni elivamile.
Uma unezimpawu ezinjalo, kufanele ushayele udokotela ngokushesha. Ekuhlolweni okuyinhloko, ochwepheshe uqhuba ingxoxo yesiguli, ukuqoqa imininingwane kokubili izimpawu nemicimbi yangaphambilini eyenza ukuhlukumeza kwesiphambano. Futhi, udokotela uhlola indawo ethintekile ukuze ahlolwe kahle.
Ukuze uhlolwe ukuqhuma okuvulekile / okuvaliwe kwe-forearm, okokuqala yenza ama-X ray. Lokhu kukuvumela ukuba uthole ulwazi mayelana nezakhiwo zangaphakathi zomzimba womuntu, unikeza umbono wesimo samathambo. Udokotela angakwazi ukukhomba indawo yenkinga.
Enye indlela ephumelelayo neyenembile yokuthola idatha iyinkomba ye-tomography. Ekuvivinyeni, sebenzisa i-computer ne-ray enamandla, okuvumela ukuba uthole isithombe esinembile sokulimala kwangaphakathi nokwakhiwa kwamathambo, izicubu zomzimba. I-Tomography ikuvumela ukuba uthole umbono we-tendon, u-cartilage. Uma ukwephulwa kwe-forearm kuyinkimbinkimbi, khona-ke i-tomography iba umsizi obaluleke kakhulu kudokotela obambe iqhaza ekubuyiseleni amathambo.
Ukubhekana nenkinga, unga
Imithi yesimanje ikuvumela ukuthi uphathe ukuphuka kwamathambo esiphezulu, noma kunjalo, impumelelo ixhomeke kulokho okukuso ukuhlukumezeka: ncamashi lapho kusemzimbeni, kunzima kangakanani. Ngokujwayelekile, odokotela baqhuba imisebenzi ehlose:
Ukubuya kwamathambo endaweni yokuqala, okuvame ukuhambisana ne-anesthesia, ukungenelela kokuhlinzwa;
Gcina indawo ethintekile, kuze kube yilapho amathambo ehlelwa.
Ukuthi umshini wokuqhekeka kwesibhamu wabonakala usebenza kahle, ubeka enye yezindlela ezilandelayo:
Ukugqoka i-Gypsum kusetshenziswe ngaphambi kokusebenza, futhi nakwezinye izikhathi lapho indlela engavamile ingadingeki;
Ipuleti yensimbi (efakwe ngesikhathi sokusebenza);
Izikrini (zifakwa ngokungahleliwe).
Ukuze unciphise ubuhlungu be-syndrome, amajojo we-anesthetics akwenziwa. Ngemuva kokusebenza, isimo sesiguli sihlolwe njalo nge-tomography noma i-X-ray ukuqapha inqubo yokuphulukisa. Uma kwenzeka ukuthuthwa kwamathambo okungalindelekile, kungenzeka ngokushesha ukuxilonga lokhu futhi uthathe izinyathelo ezifanele.
Futhi yini elandelayo?
Lapho usizo lokuqala lunikezwa ukuhlukumeza kwe-forearm, ukusebenza kwenziwa futhi isiguli senza ukuchitshiyelwa, kubalulekile ukwenza izivivinyo ezikhethekile. Umsebenzi wabo oyinhloko ukuqinisa imisipha, ukubuyisela ikhono lomzimba lokuhamba. Umsebenzi oyinhloko wesiguli nodokotela ukubuyisela ikhono lokusebenza emahlombe, iminwe. Ngokujwayelekile, i-physiotherapy inqunywe futhi imidlalo ayinqatshelwe futhi noma yimuphi umsebenzi okhuni awunqatshelwe.
Ukuphuka kwamathambo esiphezulu ngokuvamile kuvusa amaviki angu-10, ngezinye izikhathi - ngokushesha. Uma kwakukhona ukuvuleka noma ukuphulwa kwesibindi sokuhamba, khona-ke isikhathi sokwelashwa nokuvuselelwa sikhulu. Kwezinye izimo eziyinkimbinkimbi, ukutakula okuphelele akukwazi ukufezwa. Kodwa-ke, kunoma yikuphi, impumelelo yezenzakalo ngokuyinhloko inqunywa ukuthi ngokucacile isiguli silandela kanjani imiyalelo odokotela. Uma bephulwa, kungenzeka ukuthi izinkinga ziphakeme.
Yiqiniso, ikhono lokusiza ngokuhlukana kwe-frontarm iyinkhono ewusizo futhi ebalulekile, kodwa kuyasiza kakhulu ukwazi ukuvimbela isimo esinjalo. Njengoba izinyathelo zokuzivikela zincoma:
Gwema izimo eziyingozi ezingabangela ukulimala;
Lawula okuqukethwe kwe-vitamin D, i-calcium ekudleni;
Zenza njalo izivivinyo zokuqinisa amathambo;
Emsebenzini, ezemidlalo bheka imithetho yokuphepha.
I-Conservative futhi ingavamile
Ukuphulwa kwe-forearm kungaphathwa ngokuhlinzwa noma ngendlela engavamile. Ukhetho lwesibili lungenzeka uma kungekho nhlobo noma uma isimo sesiguli sinjalo ukuthi lo msebenzi ubeka ingozi enkulu yokuphila. Indlela yokuzimela ihlala isikhathi eside ku-bandage ye-plaster, engabangela ukuhlanganiswa okungalungile. Ezigulini eziningi ezenza kanjalo ukuhlukana, isilwane esithintekayo sisebenza kabi nakakhulu ngaphambi kokuphuka. Kukhona nokuhlukana okungazinzile, okukuthi kunzima ukuthola ukuphindaphinda okunembile.
Ukusebenza kubonakala yizifo eziningi ze-traumatologists njengendlela yokwelashwa eyaziwa kakhulu esikhathini sethu. Kunezindlela ezincane ezingenasidingo ezivumela ukuthi zisebenze amathambo e-ulnar nama-radial. Udokotela ngesikhatsi umcimbi ubeka ukuphakama kwamathambo, izingcezu, ukuwabeka ngokomzimba ngendlela efanele, bese ulungisa isikhundla ngamadivaysi akhethekile. Ukuhlasela okuncane kutholakala yiqiniso lokuthi amapultures amancane kuphela asetshenziselwa ukufeza izinyathelo, futhi konke ukuhamba kulawulwa nge-X-rays. Ama-tissue e-soft ahlala engaqondile, ukuphumula kuthatha isikhathi esifushane, ungashiya esibhedlela ngaphambili. Ngaphezu kwalokho, ngokuhlinzwa okunjalo, ingozi yokucindezeleka incishisiwe.
Ezingxenyeni zezibikezelo sebenzisa ukulungisa okuhlukahlukene. Enye yezintambo eziphumelela kakhulu, ezingenakulondolozwa ngokulimala kwe-diaphyses. Uma usebenzisa lezi zitshalo, ungafinyelela imiphumela ngokulimala okuncane kwe-muscle. Ukusebenza okuhambisana nokufakwa kwabalungiseleli kushiya izibazi, kodwa zincane kakhulu, cishe zingabonakali ngisho nodokotela.
Olunye uhlobo oluthandwayo lokugcina i-plate, olugxilwe emathanjeni ngamaphutha. I-osteosynthesis ihlobo "lwezinga legolide" lomuthi. Amamodeli wamapulangwe anamuhla kakhulu akuvumela ukuthi ulungise izingcezu zethambo endaweni efanele kakhulu futhi ubambelele kuze kube yilapho ukuphuka kukhula ndawonye.
Uma kwenzeka ukuphuka okuvulekile, akunakwenzeka ukugwema ukuhlinzwa. Ukungenelela kuhilela ukusetshenziswa kwezixhobo ezikhethekile ezilungisa isikhumbuzo esingaphandle. Lokhu kukuvumela ukuba uzinze isimo sesiguli, emva kwalokho ungaqhubeka nokuqhubeka nemisebenzi.
Lapho isilonda siphulukisa, isisetshenziswa siyasuswa futhi amathambo ahlanganiswe namacwecwe noma izinduku. Le ndlela isiza ukunciphisa amathuba okuba nezinkinga ezingenacala.
Ukusebenzisa i-frontarm zone akuyona umsebenzi olula. Le ndawo igcwele imivimbo, imithwalo yegazi, umonakalo wayo okungaba nomphumela omubi kakhulu esimweni sesiguli. Uma uthola ukulimala okungeziwe, kunamathuba aphezulu okubhekana nezinkinga ezingabangela ukulahlekelwa okungaqondakali kwemisebenzi noma ukuzwela. Kungenzeka ukuthi kukhona ukungasebenzi komshini. Ukuze ugweme ukucindezeleka, udokotela ohlinzayo kufanele ahlele ngokucophelela futhi asebenzise ukungenelela.
I-diaphysis yendoda endala iphilisa isikhathi eside. Ngemuva kokuphela kwamasonto ayisithupha, i-X-ray yendawo emelekile yenziwa ukuhlola ukuthi kukhona khona ucingo. Ngemva kwamanye amaviki amane, ukuhlolwa kwenziwa ngezinga lamandla. Ngokuvamile, ithambo kufanele lihlele amaphesenti angama-80% wezinga lamandla ngaphambi kokuphuka. Ukuhlelwa kabusha kwezicubu nokuphulukiswa okuphelele kuthatha iminyaka.
Njengoba indawo ewonakele ihlanganisiwe, isiqeshana sensimbi singasuswa. Lokhu kuvunyelwe akudingekile, kodwa ngezinye izikhathi ukutholakala kwesakhi sensimbi kubangela ukungakhululeki noma ubuhlungu, okuyisikhombisa sokususwa. Amapulangwe, izinduku zihoxiswa emzimbeni womuntu iminyaka emibili noma ngaphezulu. Isimo esibophekile - ezimpawu zokuhlanganiswa kwe-roentgen kufanele kube sobala.
Ngokuvamiseko okuvamile kungukuhlukana kukaSmith noma ama-Colles. Ngalokhu kulimala kwethambo, ama-debris akahlali. Ngemuva kokuhlolwa kwe-X-ray, i-bandage ye-plaster isetshenziselwa isiguli ukuvimbela ingxenye engathintekile. I-caster cast iqala kutholakale kalula, futhi iyaqhubeka ibe ingxenye yesithathu ye-forearm. Ukwehlisa imoto kwesandla kuthatha cishe inyanga. Uma i-gypsum isusiwe, i-physiotherapy inqunyelwe ukuthuthukisa imisipha yesandla. Ngokuthuthukiswa okuvamile kwalesi simo, ukutakula kuthatha amasonto amabili kuya kwamabili.
Ukuphuka okulula okuyinkimbinkimbi yokufuduka kudinga ukuguqulwa kwamathambo lapho amathambo eguqulwa emuva, edonsa ingalo emele. Umcimbi udinga i-anesthesia - yendawo, eqhubayo. Udokotela osizayo udonsa ibhulashi, omunye umsizi udonsa umlenze ohlangothini oluphambene, obambe isigqoko. Kancane kancane, welula iziqephu zethambo, udale ibanga phakathi kwabo, futhi udokotela ubeke zonke izindawo ezimbi, bese ebacindezela ukuthatha isikhundla esifanele.
Uma i-reposition isiphelile, yenza i-bandage ngaphandle kwe-gypsum, ugcine ukungezwani kwengalo ukuze ugweme ukushintshwa kabusha. Lapho i-gypsum yoma, ukuhlupha kancane kancane kwehla.
Uma kwakungenakwenzeka ukudlulisa iziqephu ngempumelelo noma ukuthola ukuthi ukuphuka kuhambisane nenani elikhulu kakhulu lezingcezu, uma ukuhlukaniswa noma amajoyini kubonakala ngokuphindaphindiwe, khona-ke ukusebenza kuyadingeka ngokuphuthumayo. I-osteosynthesis yenziwa, i-fixators isetshenziselwa kusuka ensimbi, bese kusetshenzwa ibhande lokugaya. Ngokuvamile, ngokuphuka okunjalo ku-plaster, kufanele uchithe inyanga noma isigamu, futhi ukuvuselelwa kuthatha amasonto angu-2-4.
Ukuhlukunyezwa kubangela imiphumela yokwehluka okukhulu. Baxhomeke endaweni yokulimala kanye nokuyinkimbinkimbi yayo. Uma ukuphuka kulula, ngakho konke okuphulukisa ngokushesha futhi akushiyi imicibisholo ebonakalayo, akusikhiphi izinkinga. Kodwa ukufuduka kweziqephu kuyisignali yengozi eyengeziwe yezinkinga ezengeziwe. Uma ukuphazamiseka okuvulekile okuphazamiseka kutholakala, khona-ke isimo sichazwa njengezinzima kakhulu.
Ngokujwayelekile ugcine imiphumela elandelayo yezinhlupho:
Ukuhlukunyezwa kokugcina kubonakala kaningi futhi kuqhutshwa ukulimala kwezicubu ezithambile. Inselele enkulu ukuthi ingaphakathi, futhi ibonakala ibonakala ngengozi noma ingabonakali emehlweni. Udokotela kufanele acabange ukuthi iziqhekeko zethambo zingalimala imithwalo yegazi, izicubu ezithambile.
Ukuphuma kwangaphakathi kuvame ukuhamba ngama-fractures avaliwe nokuhamba. Ngamafucu avulekile, ukulimala kwamathambo kubaluleke kakhulu, ngoba lezi zingcezu ziqashiwe kakhulu futhi kuphuma ukuphuma kwangaphandle.
Ukuphulwa komsebenzi wesifo
Lesi siphumo se-fracture senzeke kaningi futhi sichazwa njengalokho kunzima kakhulu. Kuthukuthelelwa ukuthi ithambo liphuza umonakalo isakhiwo sezintambo zomzimba esiseduze namathambo. Umonakalo ovame ukuguqulwa umonakalo ulungiswe uma ukuphulwa nokufuduka kuvulekile. Ngesikhathi nje ithambo lonakaliswa, ngokuyimpumelelo kuthinta iziqu eziseduze zezinzwa, ngenxa yalokho okulahlekelwa ukusebenza kwazo okujwayelekile.
Ukuphulwa komsebenzi wesifo kubonakala ngokulahlekelwa ubuzwe, kuhlanganise nobuhlungu nokushisa. Ngaphezu kwalokho, iminwe noma yonke ibhulashi ilahlekelwa ukuhamba, ilungu likhula liyimfihlo, imisebenzi ehlangene ivinjelwe.
Ingabe bahlanganyela empini namabutho ahlomile? Ukuxilongwa kwe "vegetovascular dystonia"
Bile esiswini: ukwelashwa nokuxilongwa
Indlela yokuphila ngezinso ezilodwa: imikhawulo, ukudla
Umlando wesikhwama: uhlobo lwesifo sikashukela sesi-2, uhlobo lwe-decompensation, incompensation, inkambo enzima, i-insulin-incike, i-insulin-incike, i-polyneuropathy yesifo sikashukela. Isibikezelo
Apula enkulu kakhulu emhlabeni jikelele: emagatsheni esisekelweni
Magic Life Waterworld 5 * - isithombe, amazinga nezibuyekezo
Irises Lapho utshalwe nendlela engcono kakhulu yokwenza lokhu? Ukuqonda butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi
Laminar futhi flow yezinxushunxushu. uketshezi ukugeleza Imibuso
Inkokhelo izinhlelo: ukubuyekezwa. Payments24.in: Ukubuyekeza, isilinganiso kanye nezici
"I-Denver Nuggets" - iqembu lebhola lebhola lebhola
Odlule okuqhubekayo. Imigomo yokusetshenziswa
Yini ethatha indawo amaqanda baking? Yini esikhundleni amaqanda e amakhekhe okuzenzela?
Puer Tea: ukubuyekezwa, izinzuzo